Ny vaksinin'ny COVID tsara indrindra eto an-tany dia misy maimaimpoana ho an'i Etazonia sy ireo mpizahatany iraisam-pirenena any Hawaii
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Ny vaksinin'ny COVID tsara indrindra eto an-tany dia misy maimaimpoana ho an'i Etazonia sy ireo mpizahatany iraisam-pirenena any Hawaii
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • fanorenana • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Fihenan'ny fihenam-bidy lava
Ny mpitsidika ao Hawaii dia mandoa hetra $ 15.00 + ary torohevitra ho an'ny Mai Tai. Maimaimpoana anefa ny vaksinin'ny COVID ary tsy misy toro-hevitra ekena.
Ireo mpizahatany mahazo ny vaksiny any Hawaii dia mahazo fihenam-bidy fanampiny sy fanomezana amin'ny alàlan'ny fitifirana vaksinina.
Izany rehetra izany dia nomen'ny fanjakana State of Hawaii sy Hawaii mpandoa hetra. Mamitaka ny antontan'isa momba ny vaksinin'ny COVID.
Ny fametrahana ny saim-bahoaka amin'ny alàlan'ny isa sandoka dia mety hitondra ho amin'ny fahatsapana tsy fandriam-pahalemana diso sy fitomboan'ny areti-mifindra sy ny fahafatesana.
Hawaii toa ny fanjakana amerikana maro dia tsy afaka mandresy lahatra ny mponina rehetra hanao vaksiny manohitra ny COVID-19. Ankehitriny dia manolotra vaksiny mangina amin'ny mpitsidika izy ireo, ary misy antony maizina kokoa.
Ny mpamaky hetra any Hawaii dia manasa ireo mpitsidika iraisam-pirenena manankarena hanome vaksim-pankasitrahana ny vaksinin'ny COVID-19.
Ny governoran'i Hawaii Ige dia manana nandrisika ny mpitsidika hijanona ao an-trano. Fa maninona no tsy noresahiny ireo mpitsidika fizahan-tany vaksinina?
Volana vitsivitsy lasa izay, nandrakitra aretina 20-30 isan'andro i Hawaii. Ankehitriny miaraka amin'ireo mpizahatany tondra-drano ny fanjakana, manakaiky ny tranga vaovao miisa 1,000 tratry ny aretina COVID-19 ary maty ny isan-karazany no mahatonga ny fizahan-tany ho lasa tsy mampino.
Be olona ny toeram-pivarotana sy hotely ary hotely fisakafoanana. Ny manintona dia mitaky sarany miditra intelo amin'ny tranga sasany ary sahirana. Tsy misy toerana hametrahana lamba famaohana eo amoron'ny morontsirak'i Waikiki, fa ny fanidiana vaovao kosa vao mainka lasa zava-misy, na izany aza, tsy araka ny filazan'ny Lefitra Lefitra Josh Green.
Vao tsy ela akory izay ny governora Ige dia nangataka ireo mpitsidika mba hijery indray ny dia mankany Aloha Fanjakana.
Mandritra izany fotoana izany, Fivarotana rongony any Hawaii mandefa doka amin'ny media eo an-toerana sy amin'ny tranokala hahafahan'ny olona manao vaksiny. Orinasa lehibe ho azy ireo ny fanomezana vaksiny maimaim-poana ary mahazo karama ireo fivarotana zava-mahadomelina. Mba hahatonga ny olona hahazo vaksiny maimaim-poana, fivarotana maro no manome tapakila fihenam-bidy misy fihenam-bidy mba hidirana ao amin'ny fivarotany. Any Hawaii, ao anatin'izany ireo mpitsidika.
Betsaka ny vaksiny misy any Etazonia. Ireo fanjakana miantehitra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany toa an'i Hawaii dia lasa mamorona mba ho tsara kokoa amin'ny statistikan'ny vaksinina. Toa izany no antony nahatonga ny Fanjakan'i Hawaii nanome tifitra ho an'ireo mpizahatany.
Miaraka amin'ny sidina iraisam-pirenena marobe tsy miato avy any Azia mankany Hawaii naverina tafaverina, ny Hawaiian Airlines, Japan Airlines, ary ANA dia mitondra mpizahatany mankany amin'ny torapasika fasika fotsy any amin'ny Aloha Fanjakana.
Ny fandehanana any Hawaii ho an'ny Japoney dia tsy misy sorona. Na inona na inona fiandohana iraisampirenena, ny mpandeha rehetra miditra ao Japon dia mizaka ny a Quarantine 14 andro rehefa tonga ary voarara tsy hampiasa fitateram-bahoaka hampidirana sidina anatiny, taxi, ary lalamby. Izay miverina mody avy any Hawaii dia tsy maintsy mijanona ao amin'ny quarantine any Japon. Fa maninona no Japoney sasany mbola mandeha amin'ny morontsirak'i Hawaii?
Ny isa amin'ny vaksiny any amin'ny firenena maro, anisan'izany i Azia Atsinanana dia ambany. Pfizer sy Moderna no vaksinin'ny COVID-19 tena mahomby sy tsy takiana. Ireo vaksinina roa ireo dia tsy misy malalaka any amin'ny firenena sasany. Ny olom-pirenena any amin'ny firenen-kafa matetika dia vonona fatratra ny hampiasa vola mba hitehirizana ny vaksiny.
Mpitsabo mpanampy mpitsabo lava Longs Drugs ao Waikiki, izay tsy te hitonona anarana eTurboNews:
“Mahazo mpizahatany maro izahay ao amin'ny Longs Drugs mangataka anay hanao vaksiny.”
Avy aiza ireo mpizahatany vaksininao?
“Japoney ny ankamaroany, nefa koa Koreana, ary ireo mpitsidika eropeana aza mangataka vaksiny. Manana mpiasa miteny Japoney izahay hanampy. Nahazo mpitsidika an-trano ihany koa izahay mangataka ny hanao vaksiny. ”
Mahazo manome ny vaksininy ho an'izay mangataka izany ianao?
“Ie, tsy manavakavaka izahay. Mangataka fiaviana ara-poko ho an'ny statistika fotsiny izahay, fa tsy mangataka ny zom-pirenena, ny toerana onenana sns. ”
Ohatrinona no andoavan'ny Longs Drugs ny vaksinina omena ireo mpitsidika vahiny na mpizahatany any ivelany?
“Izahay tsy mandoa vola amin'izany. Tena mampidina fihenam-bidy na fandrisihana ho an'izay manao vaksiny izahay. ”
Iza no mandoa ny vaksininy?
"Ny fanjakana any Hawaii dia mandoa anay amin'ny vaksininy."
Inona no karazana vaksinim-panafody omenao an'ireo mpitsidika?
"Manome vaksiny tsara indrindra eto an-tany izahay: Vaksinin'ny COVID Pfizer na Moderna."
Ahoana no hahafantaran'ny Fanjakana hoe firy ny olona tsy mponina no mahazo ny vaksininy?
“Tsy manontany ny fanjakana hoe avy aiza ireo mpanjifantsika. Izahay dia mirakitra nomeraon'ny ID, toy ny pasipaoro, laharana fahazoan-dàlana hamily. Miaraka amin'izany, mampiditra vola amin'ny fanjakana izahay. ”
Tsy ity loko maloto amin'ny nomeraon'ny vaksiny ity ve no omen'ny State of Hawaii any amin'ny CDC?
“Heveriko fa tsy ho fantatry ny Fanjakana iza amin'ireo vaksiny ireo no mponina ary iza no mpitsidika. Ny hany angatahinay amin'ny marary dia ny hahazo tifitra faharoa 3-4 herinandro taty aoriana. Heveriko fa asa tsara ho an'ny hotely sy hotely, trano fisakafoanana ary toekarena eto amintsika izany. ”
Miorina amin'izany, 71% ny vaksiny voatifitra voalohany tany Hawaii, ary taha ambony noho ny 51% vita vaksiny tanteraka ao amin'ny Fanjakana no mety ho diso.
Manokana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mpitsidika maherin'ny 1,000 no tonga any Hawaii amin'ny sidina tsy miato isan'andro. Mpitsidika iraisam-pirenena maro hafa no tonga amin'ny fampifandraisana sidina mamakivaky ny tanibe Etazonia.
Eo an-toerana, Hawaii dia mihoatra ny 20,000 ny isan'ireo tonga isan'andro isan'andro hatramin'ny nanolorana malalaka ny vaksiny tsy nisy fanendrena.
Manokatra fanontaniana maro io.
Amin'ny famoahana isa mahomby momba ny vaksiny, dia mora tohina noho ny tokony antenaina ny olona ao Hawaii?
Hanazava izany ve ny antony mahatonga ny aretina sy ny taham-pahafatesan'i Hawaii hanoratra firaketana vaovao saika isan'andro?
Fa maninona no omen'ny mpandoa hetra any Hawaii ny vaksininy? Tsy manan-kialofana na mahantra ny mpizahatany. Raha te-handoa vola ny toeram-pialan-tsasatra na seranam-piaramanidina iray dia tsara. Miaraka amin'ny isan'ny tsy manan-kialofana sy olona marobe mipetraka an-tsisiny any Hawaii dia mila vola miditra ny fanjakana hikarakarana ireo olana ara-tsosialy goavambe toy izany.
Firenena maro eto amin'izao tontolo izao no voan'ny aretina COVID ary maty. Tena mila vaksinina maika izy ireo. Ny olom-pirenenan'izy ireo dia tsy afaka manao vakansy any Hawaii.
Raha tokony homena ireo mpizahatany manankarena ilay vaksininy, maninona no tsy mampidi-bola avy amin'io vaksiny io i Hawaii ary handefa izany any amin'ireo firenena sahirana?
Tsy misy maharatsy ny fizahan-tany vaksinina. San Marino, Israel, ary firenena maro hafa dia manana indostrian'ny fizahan-tany vaksinina. Ny olana dia ny fandotoana ny antontan'isa sy ny fametrahana ireo tandindonin-doza amin'ny alàlan'ny fanomezana zava-misy tsy marina, izay tsy hoe diso fotsiny, fa mety ho mpanao heloka bevava.
Ny ataon'i Hawaii amin'ny isa marobe ary manana tsiambaratelo - ireo hetsika ireo dia avoaka amin'ny fomba ofisialy sy ampahafantarina any Guam avy amin'ny Birao fizahan-tany Guam.